Beach Tourism Unmasked: COVID-19 | Responsible Tourism News
Other • fanarenana ny dia • Vaovao momba ny fizahantany tompon'andraikitra • Vaovao momba ny fizahantany • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • News News
Tsy nisaron-tava ny fizahan-tany amoron-dranomasina: COVID-19
Home » Lahatsoratra » Vaovao momba ny fizahantany tompon'andraikitra » Tsy nisaron-tava ny fizahan-tany amoron-dranomasina: COVID-19
Ny fizahan-tany dia motera ara-toekarena ho an'ny firenena maro, ary nitombo be izany nanomboka tamin'ny taona 1970 izay olona 200 tapitrisa latsaka no nandeha tany ivelan'ny fireneny manokana nanao fialantsasatra; tamin'ny taona 2019, mpandeha 1.5 tapitrisa mahery no noheverina ho mpizahatany.
Na ho an'ny mpandeha amin'ny fialamboly na ho an'ny orinasa, “andrasana” ireo fotodrafitrasa ho an'ny traikefa amin'ny dia. Manomboka amin'ny fitateram-bahoaka sy manokana mankany / avy amin'ny seranam-piaramanidina, mankany amin'ny seranana an-dranomasina sy ny gara hatrany amin'ny toerana alehany ary miantoka famandrihana trano fandraisam-bahiny sy trano fisakafoanana - nohajaina daholo ny faritra rehetra amin'ny fizarana fizahan-tany.
Firenena maherin'ny 44 no miantehitra amin'ny dia sy fizahan-tany mihoatra ny 15 isan-jaton'ny ampaham-bidin'ny asa, ary COVID-19 dia rava ny toekareny, miaraka amin'ny fahasahiranana miavaka mianjady amin'ireo firenena nosy. Any Antigua sy Barbuda, miaraka amin'ny totalin'ny 97,900 91, 106,800 isan-jaton'ny mponina no miasa amin'ny fizahan-tany sy fizahan-tany. Aruba, miaraka amin'ny mponina 84 183,600, 78 isan-jato no miasa amin'ny fizahan-tany sy fizahan-tany. St. Lucia, miaraka amin'ny mponina 104,400, 69 isan-jato no miasa amin'ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany, ary ny Nosy Virgin US, miaraka amin'ny mponina 2019 XNUMX, XNUMX isan-jaton'ny olom-pireneny miasa amin'ny indostria mifandraika amin'ny fizahan-tany sy fizahan-tany (visualcapitalist.com, XNUMX).
Tsy ny rehetra no manaiky
Heverin'ny governemanta fa mahasoa amin'ny toekarena ny sehatry ny hotely, fitsangantsanganana ary fizahantany. Ny mpitarika raharaham-barotra sy politika, fatra-pitady vola vahiny, dia dodona ny hameno ny efitrano fandraisam-bahiny, trano fisakafoanana, fisotroana ary torapasika ary vonona hitandrina amin'ny rivotra, tsy miraharaha ireo torolàlana momba ny fahasalamana amin'ny fijanonana (na fanamboarana) COVID-19.
Mampalahelo ho an'ny indostria, ilaina ny famerana rehefa manakaiky ny areti-mandringana satria ny fihoaran'ny olona manerana izao tontolo izao amin'ny toerana voafetra dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fanaparitahana ny COVID-19. Avy amin'ireo kaompaniam-pitaterana mitondra mpandeha sy mpiasa mararin'ny faritra maro eran'izao tontolo izao, ary ny mpandeha an-tsambo sy ny ekipa mampiely ny tsimok'aretina avy amin'ny vitsy ka hatramin'ny maro ny olona, ​​ny fizahantany dia nanjary pariah teo amin'ireo sehatry ny orinasa lehibe noho ny fandraisana anjara tsy nahy tamina fitotonganana manerantany ary tsy niriana ( na tsy afaka) manalefaka ny loza.
Orinasa maro, sy ny mpitantana governemanta ary koa ny mpanao politika any Karaiba sy ny toeran-kafa mifantoka amoron-dranomasina no maniry ny hiverenan'ireo mpizahatany; na izany aza tsy ny olona rehetra manana tsatokazo ao an-toerana no mitovy hevitra aminy. Ny vola lany amin'ny famatsiam-bola amin'ny fampielezana marketing be dia be mba hamporisihana ny mpitsidika hiverina dia hanoherana ny tahotra ny mety ho fiparitahan'ny virus amin'ny mpizahatany mankany amin'ny olom-pirenena eo an-toerana.
Tsy vao sambany no nisy nanelingelina ny sehatry ny fizahan-tany noho ny fisehoan-javatra manerantany; na izany aza, noho ny toetoetran'io areti-mifindra io sy ny ambaratonga manerantany dia mety haharitra kokoa ny fiatraikany ary handalina lalindalina kokoa ny trano fandraisam-bahiny, indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany miaraka amin'ireo mpivarotra sy mpamatsy (ary miankina aminy) potika noho izy ireo. Ny trano fandraisam-bahiny misy any amin'ny toeran-dranomasina dia azo inoana fa ho tafavoaka velona satria afaka miato ny hetsika (na miverina miverina) rehefa manome fanampiana an'ireo mpiasa tsy mahazo volo; na izany aza, kely kokoa, tompona orinasa mpandraharaha dia mety tsy ho ao anatin'ny toe-javatra ara-bola mitovy amin'izany ary marefo amin'ny tsy fahombiazana noho ny fahaverezan'ny fidiram-bola tampoka.
Mandehana any amin'ny Beach
Mpitsidika maro no misafidy morontsiraka ho fialantsasatra fialantsasatra satria te hiala sasatra, handositra ary hanao fialam-boly mifandraika amin'ny rano. Ny fitomboan'ny fizahan-tany amoron-dranomasina dia nitarika ny tsindry tamin'ity fananana fizahantany voalohany ity, mandrahona ny harena ara-toekarena, fialamboly, voajanahary, hatsarana ary kolontsaina mifandraika amin'izany. Amin'izao fotoana izao, ny fifantohan'ny fitantanana amoron-dranomasina dia ny fanomezana izay ilain'ny mpanjifa fa tsy ny fitohizan'ny filaminana.
Voatsikera ny mpitantana amoron-dranomasina noho ny tsy firesahany ireo tontolo iainana sarotra arahin'izy ireo. Any amin'ny firenena sasany dia tsy raharahan'ny fitantanana amoron-dranomasina ny lafiny ara-batana, tontolo iainana, sosialy ary toekarena amin'ity trano tsy manam-paharoa ity na dia andraikitr'ireto olona ireto aza ny mitahiry sy mandamina ny tontolo voajanahary rehefa mamaly ny filàna / filan'ny mpizahatany. Ny andraikitra amin'ny fitazonana ireo rafitra amoron-dranomasina voajanahary ary mametra ny hetsika (raha ny tombontsoan'ny tontolo iainana no mahasoa indrindra ny tontolo iainana) dia tsy mora satria misy fiatraikany mivantana amin'ny fidiram-bolan'ny toerana itodiana na hotely ary matetika ny dingana amin'ny tombotsoan'ny politika, ny governemanta ary ny raharaha ara-barotra.
Raha te hanana fitantanana amoron-dranomasina mahomby dia tsara kokoa ny mamantatra hoe iza no mampiasa ny morontsiraka sy ny antony manosika ny mpizahatany satria ny fahitana ny toerana haleha dia miova arakaraka ny firenena niaviany sy ny taonany. Ny dingana voalohany dia ny famaritana ireo olan'ny vondrona mpampiasa isan-karazany ary avy eo manangana fanentanana mifantoka amin'ny fiantraikany maharitra sy maharitra amin'ny fitondran-tenany amin'ny tontolo iainana. Ny tanjona dia ny hamolavola ezaka ara-barotra izay hametraka fifandanjana eo amin'ny fitakian'ny mpampiasa sy ny filàna fiarovana ny tontolo iainana amoron-dranomasina - ny fampandraisana anjara ny mpampiasa amoron-tsiraka ho mpandray anjara (mpiara-mitantana) amin'ny fitantanana sy andraikitra amin'ny fiarovana ny vondron'olona ekolojika amoron-dranomasina.
Ireo mpandeha izay misoroka loza dia tsy dia mitsidika ny toerana be olona toy ny moron-dranomasina ary mety hiara-miasa bebe kokoa amin'ny tolo-kevitry ny governemanta, mandray ny fomba fiasa miaro fahasalamana. Tsy midika izany fa hisoroka ny torapasika ny mpitsidika fa kosa hisafidy faritra lavitra kokoa, ambany hakitroka ary heverina ho manokana kokoa. Ireo mpitia amoron-dranomasina mavitrika dia mety hamaivanina ny mety hanarahana ny masiny. Mety hitranga izany satria mandray an-tsitrapo ny risika izy ireo ary noho izany dia manantena ny vokany, na, tsy manana traikefa mivantana amin'ny viriosy, dia matoky loatra ny fahasalamany manokana sy ny fahasambaran'ny namany sy ny fianakaviany ary, ankoatr'izay, Ny toerana ivelany dia heverina ho tsara ary noho izany dia azo antoka ny morontsiraka.
Saika alina iray alina, ny morontsiraka malaza indrindra eto an-tany dia nesorina tamin'ny alàlan'ny COVID-19, izay nisy fiatraikany tsara amin'ny fotoana fohy amin'ny tontolo morontsiraka, ary niaraka tamin'izay dia nanambana fandrahonana vaovao kosa ny viriosy. Mba hisorohana ny valalabemandry dia maro ny mpitsidika tsy mandeha any amin'ny morontsiraka ambanivohitra sy voajanahary izay mety hanana tontolo iainana marefo sy / na mampidi-doza kokoa amin'ireo mpilomano sy mpitety onja noho ny fisondrotry ny onja, ny tsy fisian'ny mpiambina aina na ny tsy fisian'ny toeram-panjakana hafa toy ny efitrano fitsaharana , serivisy fijanonana, fanadiovana ary fiarovana.
Ny fahasimban'ny tontolo iainana eny amoron-dranomasina dia tena mety tokoa satria ny mety hisian'ny rano maloto dia mety ho voan'ny virus ary io fandotoana mety io dia hodinihina mafy amin'ny firenena an-dàlam-pandrosoana. Ny viriosy dia afaka mitazona ny fahaizany mifindra ao anaty rano mandritra ny fotoana maharitra, manimba ny tontolo iainana anaty rano amin'ny alàlan'ny fanariana maloto.
Mihantona anaty rano sy fasika ny poti-javatra matevina ary raha tsy mitsabo ny rano maloto ny firenena alohan'ny hamoahana azy amin'ny renirano, renirano ary ranomasimbe, dia tena azo atao tokoa ny mampita fecal avy amin'ireo mpitatitra COVID-19. Ireo mpitsangatsangana, mpitaingin-tsoavaly ary mpitsidika amoron-dranomasina dia mety hahazo otrikaretina amin'ny alàlan'ny fihinana, fofohana, na fifandraisan'ny hoditra amin'ireo sombin-javatra ireo. Na dia any amin'ireo firenena manana programa fanaraha-maso be pitsiny aza, ny fifantohan'ny mikraoba avy amin'ny fahalotoan'ny fotaka dia matetika mihoatra ny tokonam-baravarana avela aorian'ny andro orana rehefa mifangaro amin'ny rano maloto tsy voatsabo na voatsabo ny ampahany amin'ny ranomasina.
Ny fijerena tontolo iainana ho an'ny mpitondra fanjakana sy ny sehatra tsy miankina, ao anatin'izany ny manampahefana eo an-toerana sy ny mpitantana ny moron-dranomasina dia ny fiantraikan'ny akora simika ampiasaina amin'ny be dia be hanaparitahana ny habakabaka. Ireo akora ampiasaina hampiatoana ny viriosy dia mety hisy fiatraikany amin'ny zavamananaina an-dranomasina koa rehefa entina mankany amin'ny ranomasina amin'ny alàlan'ny rafitry ny rano maloto sy rano. Ireo zavatra simika ireo dia mety hiteraka fahafatesan'ahitra, trondro, moloka, hazondamosina, ahitra sns sns ary hanimba ny mpilomano sy ny mpitsidika amoron-dranomasina.
Mifandraika amin'ireto olana ireto dia ny fampiakarana ny fitafiana miaro (izany hoe fonon-tànana, sarontava) izay mety hatsipy amin'ny fomba tsy mendrika ary hiafara amin'ny ranomasina na ranonorana. Any amin'ny faritra amoron-tsiraka tsy misy fitsaboana tsara ny ranon'orana, ny zavatra mety voaloto dia mety hiafara amin'ny ranomasina na hosasana amin'ny moron-dranomasina izay atahorana ny zavamananaina an-dranomasina ao anatin'izany ny crustacea, mololo, vorona, sokatra ary trondro izay mihinana ny mikroplastika avy amin'ny zavatra simika simika.
Arovy ny morontsiraka
Ireo mpanafika amoron-dranomasina sy mpitantana amoron-dranomasina dia mitaky fomba vaovao amin'ny fiarovana sy filaminana miaraka amin'ny fiarovana ny tontolo iainana raha toa ka mijanona sy / na miverina amin'ny ambina maharitra ireo toerana ireo. Ny hevitra momba ny fiarovana ny morontsiraka dia ahitana tranoheva amoron-dranomasina mba hampisarahana ny vondrona mpampiasa (Santorini, Gresy); na izany aza, noho ny hazavana UV avo lenta, ny famafazana ranon-tsiranoka ary ny fiovan'ny mari-pana lehibe dia mampitombo ny mety hisian'ny fahatapahana, ny fogging na ny fahaverezan'ny mangarahara, noho izany - io hevitra io dia tsy mahazo hery; hevitra iray hafa manolotra ny halavirana ara-tsosialy mifototra amin'ireo faribolana voasarika mankany amin'ny habakabaka.
Na dia miseho aza ny mpitsidika iray COVID-19 maimaimpoana dia mety hamindra ny viriosy amin'ny hafa izy ary mba hiantohana ny fahasarotana ara-tsosialy maro amin'ireo mpitantana amoron-dranomasina dia manana trano fidiovana mihidy mba hampihena ny risika amin'ny fifandraisan'ny hoditra amin'ireo faritra mety voan'ny aretina. Misy kojakoja maro hafa koa mihidy (kiosko sakafo / zava-pisotro, fandroana), ao anatin'izany ny fanesorana seza sy efitrano fandriana. Ny morontsiraka misy catwalk hazo ho an'ny mpitsidika dia manoro hevitra ny làlan-droa roa nosarahana farafahakeliny elanelana 6 metatra handrarana ny fifandraisana akaiky amin'ny hafa.
Tsy jerena ny fitantanana ny tontolo iainana amoron-dranomasina na dia antony lehibe mahatonga ny mpivezivezy aza misafidy izay toerana halehany mandritra ny fialantsasatra anatiny sy iraisam-pirenena. Ho an'ny toerana manodidina ny faharetan'ny fizahan-tany amoron-dranomasina:
1. Ny mpitondra sehatra tsy miankina sy tsy miankina dia tsy maintsy manomboka mamantatra sy manao lisitra ny morontsiraka rehetra ao amin'ny toerana misy azy avy, manoratra ny toe-javatra misy ankehitriny sy mamaritra izay tokony hatao hahatrarana ny haavon'ny fizahan-tany azo ekena, maharitra sy maharitra.
2. Avy eo dia ilaina ny mamantatra ireo lehilahy sy vehivavy tompon'andraikitra amin'ny fitazonana io harena voajanahary manan-danja io.
3. Moa ve ny fitantanana amoron-dranomasina lasa andraikitry ny tompona hotely / mpitantana, masoivohom-panjakana, fifangaroan'ny fitantanana tsy miankina / ampahibemaso?
4. Iza no tompon'andraikitra amin'ny fitantanana ny fako; ahoana no hataon'ity olona ity / masoivoho tompon'andraikitra amin'ny fitazonana ny rano hadio sy hadio ho an'ny besinimaro?
5. Inona ireo paikady fanadiovana ampiasaina ary mahasoa azy ireo ve ny tontolo iainana sy azo antoka ho an'ny mpilomano, ny mpandeha surf, ny mpandeha amoron-dranomasina ary ny fiainana an-dranomasina?
6. Iza no tompon'andraikitra isan'andro? mitazona ny torapasika ho madio ary azo antoka?
7. Iza no manome fanaraha-maso an'ireo toerana marefo ireo?
8. Iza no mamatsy sy mitazona ny takelaka manome fampahalalana mifandraika amin'ny mpitsidika sy ny mponina eo an-toerana?
9. Iza no tompon'andraikitra sy tompon'andraikitra amin'ny fandaharam-pampianarana momba ny tontolo iainana?
10. Iza no miantoka sy mitazona ny fanamarinana mifandraika amin'ny rano sy ny fahasalamana?
11. Iza no manapa-kevitra sy mitandrina ny fanamboarana sy ny fikojakojana ny fidirana amoron-dranomasina?
12. Iza no manapa-kevitra sy mitazona fotodrafitrasa amoron-dranomasina ao anatin'izany ny tilikambon'ny mpiambina, trano fidiovana, fandroana, toeram-pijanonana, kioska sakafo, latabatra fampahalalana, ora fiasana, fandaharam-potoan'ny polisy / fiarovana, ekipa mpamaly ny loza, fiarovana ary loza.
13. Iza no mandoa ny serivisy rehetra ilaina amin'ny fampandrosoana sy fikojakojana moron-dranomasina?
Tsy azo soloina na averina atao kopia
Talohan'ny COVID-19, ny indostrian'ny fizahantany dia tsy nihevitra ny hevitra momba ny fitantanana morontsiraka ho lohalaharana. Ankehitriny ity bionetwork marefo ity dia nanjary fifantohana ary mitaky fahitana akaiky. Ny lisitra amoron-dranomasina sy ny mpitantana miasa miaraka amina fahaiza-manao miavaka dia manakiana ny fampivelarana sy ny fitazonana io singa lehibe io eo amin'ny sehatry ny fizahantany. Ny fitantanana ny fako madinidinika dia tsy nampiditra fako mifindra biolojika toy ny sarontava sy fonon-tanana, taloha. Ity scenario vaovao ity, miaraka amin'ny fepetra takiana amin'ny fanaovana sarontava amin'ny habakabaka dia misy torapasika. Ny fanamby dia ny hahazoana antoka fa ariana tsara ity fako ity noho ny fiantraikany eo amin'ny tontolo iainana amin'ny olona sy ny fiainana an-dranomasina.
Inona no madio? COVID-19 dia manangana fanontaniana bebe kokoa nefa tsy manome valiny marina. Ny fomba fiparitahan'ny otrik'aretina amin'ny ranomasina sy ny rano madio ary ny fasika, ary ny fitazonana ny tontolo iainana hilamina sy hadio dia asan'ny olombelona sy ny vokatra simika (izany hoe ny «bleach) ary mitaky fiheverana ary koa valinteny feno fiheverana sy manan-tsaina.
Ankoatra ny fiarovana amin'ny heloka bevava sy ny asa ratsy, ny fanaraha-maso amoron-dranomasina izao dia ahitana ny filàna fanaraha-maso ny fahafahan'ny morontsiraka sy ny halaviran'ny fiaraha-monina. Ny toerana sasany dia mampiasa drôna sy rafitra fanisana voadio mba hiarovana ny tsirairay ary ny hafa kosa matoky ireo mpizahatany mba “hanao ny tsara”.
Any ankoatry ny Open / Closed, ny signage amoron-dranomasina dia zava-dehibe ankehitriny satria tsy maintsy misy hafatra momba ny fampiasana ny saron-tava, ny fivezivezena, ny fialan-tsasatra ary ny toerana ara-tsosialy; fanalavirana ny fiseraserana aman'olona; isa mpitsidika, sns.
Ireo mpamorona tranonkala sy rindrambaiko dia namolavola rindranasa finday ahafahan'ny mpampiasa amoron-dranomasina hitahiry ny habak'izy ireo na manome fampahalalana tena izy momba ny fahaizan'ny tora-pasika. Any Korea atsimo dia mamoaka kaody QR ny fampiharana izay mamela ny mpandeha amoron-dranomasina hifandray raha misy valanaretina COVID-19 mifandraika amin'ny torapasika notsidihin'izy ireo.
Karazan-doza any Karaiba
Ny toekarena ao amin'ny faritra Karaiba dia miankina amin'ny fizahan-tany ary mpitsidika maherin'ny 55M no nisafidy ity toerana ity ho an'ny fialantsasatra amin'ny taona 2019. Miaraka amin'ny fitomboan'ny isan'ny mpitsidika dia ny fiakaran'ny risika mifandraika amin'ny fahasalamana, fiarovana ary filaminana amin'ireo mponina eo an-toerana. Ny faritra dia mora voan'ny H1N1, zika, norovirus, kitrotro ary, COVID-19 amin'izao fotoana izao. Mampalahelo fa nifantoka tamin'ny mponina eo an-toerana ny rafi-pitantanana fahasalamana ary ny fiheverana ny fanaraha-maso ny fahasalaman'ny mpitsidika dia làlana vaovao ho an'ny indostrian'ny fizahantany.
Ny faritra koa dia tsy ampy fampiofanana momba ny fidiovana ara-tsakafo sy tontolo iainana ary fepetra fiarovana / fiarovana hafa ary tsy misy fampidirana firy eo amin'ny sehatry ny fizahan-tany sy ny mpamatsy fahasalamana ary ny serivisy mifandraika amin'izany. Noho ireo lesoka ao anaty protokoloka ireo dia nisy ny fipoahan'ny aretina, ny olana amin'ny fiarovana ny sakafo, ary ny fanambin'ny fanadiovana ny tontolo iainana izay mety hanimba tanteraka sy / na handrava ny indostrian'ny fizahantany iray manontolo. Mila rafitra ny faritra mba hanaraha-maso ny fahasalaman'ny mpandeha sy ny mponina eo an-toerana, manome vaovao ara-potoana ary hamaly haingana mba hisorohana sy / na hifehezana ny vonjy taitra mifandraika amin'ny fahasalamana.
Mifantoha amin'ny Diversification
Ireo toerana kendrena iray izay manidina madiodio, miankina tanteraka amin'ny masoandro, ny ranomasina ary ny fasika ho an'ny toekaren'izy ireo dia afaka mihevitra ireo embargo pandemika ho fotoana mety indrindra hampielezana ny harinkarenan'izy ireo; na izany aza, toa misy kely na tsy liana amin'ity ezaka ity. Na eo aza ny fitomboan'ny tranga COVID-19 manerantany dia tena manintona tokoa ny fiakaran'ny vidin'ny rivotra mankany amin'ny toerana amoron-dranomasina satria mamela io fitohizan'ny "asa toy ny mahazatra" io fidiram-bola io. Ho an'ireo toerana itadiavana ny hanakantsakanana ny lafiny roa amin'ny fefy - mamela ny fidirana amin'ireo mpandeha manerantany mitady fialan-tsasatra nefa mitazona ny mponina ao aminy tsy ho COVID-19, ny valiny dia miafara amin'ny hafatra manjavozavo, manampy trotraka ny fanahiana mahazo ny mpitsidika mety ho avy.
Ny volam-bahoaka sy ny sehatra tsy miankina dia manana banga fitarihana. Ireo lehilahy sy vehivavy amin'ireto toerana ireto dia tsy mandany fotoana na manao ezaka handinihana ny fahitan'ny mpizahatany ny loza mety hitranga miaraka amin'ny fiheverana ny tontolo iainana sy ny paikadim-pitantanana miaraka amin'ny tanjona hamoronana vokatra fizahan-tany maharitra izay hiasa anio sy rahampitso. Ny banga iray hafa any amin'ny sisintany misokatra ho an'ny mpitsidika dia ny tsy fahampian'ny fiheverana ny mety ho mpitsidika mandoto ny rano sy ny fasika amin'ny COVID-19 satria fasika, ary ny ranomasina dia làlana azo zahana amin'ny famindrana virus sy ny fampiasana otrikaretina otrikaretina simika amin'ny famotehana ny ny tontolo iainana an-dranomasina sy ny mpandroana dia tsy anisan'ny nikajiany.
Azontsika atao ny manantena (sy mivavaka) fa ny fahazavana miaraka amin'ny filàna ara-toekarena sy ny drafitra lavitra dia hanova ny ho avy amin'ny tanjon'ny nosy.